कोही किन ‘सीता’ बन्ने, किन कोही ‘सीता’ नबन्ने?
प्रदीप गिरी शनिबार, फागुन २२, २०७७
कति सीता बन्छु भन्छन्, कति सीता बन्दिनँ भन्छन्। यो सीता विमर्शमा, चाहे राम विमर्शमा अयोध्यालाई तानेर बलरामले तानेजस्तै परशुरामले तानेजस्तै उत्तरप्रदेशको अयोध्यालाई प्रधानमन्त्रीले तानेर रौतहट कि कहाँ ल्याउने प्रयास गरेजस्तै, मूल कुरा के हुन्छ भने यो रामायणकाे उत्पत्तिको कथा के हो भन्ने कुरामा मान्छेको ध्यान जाँदैन। रामको कथा अनन्त छ। कहिलेदेखि हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन।
आध्यात्मिकतामा के भन्छ भने रामकथा अनन्त छ। हरिकथा अनन्त भनिन्छ बारबार रामायणमा। तर एउटा पुस्तकक जो आदि रामायणका नामले वाल्मिकी रामायणका नामले प्रचलित छ। रत्नाकर भनेर चिनिएका र पछि वाल्मिकी नामले प्रसिद्ध भएका एक व्यक्त्ति जो दसीवृत्ति गरेर खान्थे, पछि कवि भए।
ती वाल्मिकीले लखेको रामायण छ। त्यो रामायणमा रामको वर्णन छ। रावणको वर्णन छ। कौसिल्याको वर्णन छ। हिँजो यहाँ एकजना सहभागी वक्ता मनिका झाले ‘आइ वान्ट टु बि सीता’ भन्नुभएछ। काठमाडौंकी एउटी विदुषी, प्रसस्त पढ्नु लेख्नु भएको, किताव पनि लेख्नु भएकL नाम भन्दा त सबैले चिन्नुहुन्छ। यहाँ नाम भन्न आवश्यक ठान्दिनँ। उहाँले बिहानै फोन गरेर भन्नुभयो– दाइ तपाई आज बोल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त हिजाे एक जनाले सीता बन्छु भनिछन्। आजको जमानामा सीता बन्न सम्भव छ? यस्तो प्रश्न भन्नुभयो।
कतिले त सीता बन्दैन भन्नुभएको छ। एक जना कवि सपना सञ्जीवनीले सुन्दर मैथली भाषामा भन्नुभएछ– अब हम सीता नैबव।
त्यो सन्दर्भ कोट्याएर प्रश्नहरू पनि आइराखेका छन्। मैले प्रश्न गर्नेहरूलाई धृष्टतापूर्वक सोधेँ-कुन रामको कुरा गरेको तपाईले? वाल्मिकीको रामको, तुलसीदासको रामको, अध्यात्म रामायणको? लेखक त थाहा छैन, दक्षिण भारतका थिए भनिन्छ अध्यात रामायणका रामको? अरु पनि त्यस्तो कुनै प्रदेश छैन जहाँ रामका कथा नलेखिएका होउन्। मिथिलामा पनि दुईवटा राम र रामायण प्रचलित छ चन्दा झा र श्रीवत्सको । अर्को भानुभक्त्तको रामायण छ त्यो हामी पनि पढिरहेका छौं। तर मलाई लाग्छ सबै कथा वाल्मिकीले नै सुरु गरेको हो। त्यो हामीले पढेका छौं।
त्यसैले अब म त्यो वाल्मिकीको रामायणमा के छ भनेर हल्का बताउने प्रयास गर्छु। मसँग त्यो पुस्तक त छैन अहिले। तर पुस्तकको भन्दा पनि ज्यादा प्रभावशाली अहिले लोक रामायण प्रचलित छ। लोकमा रामको कुन छवि छ। लोकमा सीताको छवि कस्तो छ। लोकले सीतालाई कसरी हेरेको छ। सञ्जिवनीले कसरी हेर्नुभएको छ। मनिकाले कसरी हेर्नुभएको छ। तपाई-हामीले कसरी हेरेका छौं। अथवा अपठित अवधको, मिथिलाका, भोजपुरका दिदी बहिनी आमाछोँरीले कसरी हेर्छन्?
वाल्मिकीको रामायणलाई हेर्दा, सीतालाई हेर्दा त्यहाँ भएका महिला पात्रसँग तुलना गर्नुहोस्। महिलासँग तुलना गर्दा सीताभन्दा अघि त्यहाँ रामको भेट ताडका भन्दा एउटी राक्षसीसँग भेट हुन्छ। अनि रामले उसको बध गरिदिन्छन्। ताडकापछि उनको भेट समाजमा बहिस्कृत र पतिता अर्की नारी अहिल्यासँग हुन्छ। किन त्यस्तो भनिएको अहिल्यालाई त्यो तपाईं-हामी सबैलाई थाहा होला। अहिल्यापछि जनकपुरमा सीता भेटिन्छिन्। सीता पनि खासगरीकन यो सीताको ठाउँ पवित्र जन्मस्थलमा हामी छौं। तुलसीदासले जुन तरिकाले राम र सीताको भेटको वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो भेट पनि बडो रहस्यमय छ। यहाँ तुलसीदासको रामायण लोकप्रिय छ। त्यहाँ सीता र रामको वर्णन हुन्छ त्यो पनि रसमय साथ।
आँखा- आँखा जुधेको कुरा भक्त्त तुलसी दासले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी फर्केर अयोध्या जाऔं कैकेयीको चरम रुप देखिन्छ। उनले भन्छिन् मेरो छोरालाई राज्य दिनुपर्छ। अर्को जवर्जस्त व्यक्त्तित्व सर्वविदित छ। त्यसपछि कैकेयीसँग बिदाइका क्रममा रामले भनेका छन्-माता मेरो पिता दशरथ उदास हुनुहुन्छ। बोल्दै बोल्नुहुन्न। जसले मलाई देख्नाबित्तिकै जस्तो दुख परे पनि हँसिलो, रसिलो आनन्दित बन्ने मेरो बुवा आज त हेर्न पनि चाहिरहनुभएको छैन भनेर रामले भन्छन्। अनि कैकेयीले भन्छिन्– धेरै ठूलो चोट परेको छ। यिनलाई मैले धेरै पुरानो वरदान सम्झाएँ। सम्झाउनासाथ उनलाई एकदम आघात भयो। अब तिम्रो हातमा छ यिनले आफ्नो वचन पूरा गर्छन् कि गर्दैनन्। यिनलाई मैले भनेँ मेरा दुई वरदान थाती छ त्यो दुई वरदानमध्ये एउटा रामलाई वनबास एउटा भरतलाई राज। त्यो सुन्नासाथ तिम्रा बाउका नौनाडी गलेको छ, गला सुकेको छ। चिन्तु न इन्तु भएका छन् यिनी बोल्न सक्दैनन्।
रामले भन्छन्– त्यो मलाई बाउले किन भन्नुपर्‍याे। तिमीले भने पनि गरिदिन्छु म यत्ति त। यहीँनेर रामको चरित्र प्रकट हुन्छ। उनले भन्छन् यो त मलाई बाउले भन्नैपर्दैन। बाउआमा दुईजनैले भनेपछि त म जे पनि गरिदिन्छु। अग्निमा पुग्न तयार छु। पृथ्वी छोड्न तयार छु। सीता छोड्न तयार छु। लक्ष्मण छोड्न तयार छु। त्यहाँ पनि सीताको नाम लिन्छन्। जंगल जान कुन अप्ठ्यारो भो। हजुरले भने पुग्यो मलाई। झन बाउको आज्ञा, बाउको प्रतीज्ञा।
एक त वाल्मिकी रामायणको चर्चै हुँदैन अचेल। कसले पढ्ने किन पढ्ने?कौसल्याको त्यो वर्णन दुई अध्यायमा छ वाल्मिकी रामायणमा। सौताको रिस। कौसल्याले के भन्छिन् भने यत्रा दिन तिमी राजा बन्लाउ तिमी जेठो छोरो भएर जन्मेउ। तिमी युवराज बन्छौ, राजा बन्छौ भन्ने आशामा मैले बिताएँ। सौताको मुनि, सौता भन्ने शब्द याद राख्नुहोला, कैकेयीको दासीभन्दा तल बसेर मैले जीवन गुजारिराखेको छु। अनि तिमी जंगल जाने भएपछि,(उनको जंगल जाने उमेरको बारेमा हामीलाई थाहा छैन, त्यहाँ अनेक प्रसङ्ग छ।) तिमी २७ वर्षको भयौ भन्छिन् त्यहाँ। तिमी २७ वर्ष होउन्जेल म तिम्रो मुख हेरेर दुख खपेर बसेको थिएँ।
त्यहाँ दुई अध्यायसम्म सौताको बारेमा वर्णन गरिएको छ। छोरोलाई उनले आफ्नो दु:ख बताउँदैछिन्। कैकेयीको नोकरको भन्दा मेरो तलको दर्जा छ। तै पनि खपेर बसेको छु, एक दिन तँ राजा हुन्छस् भनेर। तँ जंगल जाने? धिक्कार यो समाचार सुन्दासमेत म किन मर्दिनँ? किन मेरो छाति फाट्दैन?उनी त्यहाँ क्रुर हुन्छिन्। त्यहाँ ती महिलाको वर्णन आउँछ।
अर्की महिलाको वर्णन आउँछ सुर्पणखाको। सुर्पणखाअदभूत पात्रा हुन्। फेमनिस्ट मुभमेन्टका सदस्यहरूलाई सुर्पणखाको नाक, कान काटेकोमा बेलाबखतमा झनन्क रिस पनि उठ्छ होला, प्रेम निवदेन गर्दा नाक, कान काटिने? भनेर।
तुलसी दासले पनि त्यही दोहोर्‍याएका छन्। अध्यात रामायणमा पनि त्यही छ। वाल्मिकीको पनि त्यही छ। यिनिहरूले कथा परिवर्तन गरेका छन् बीचबीचमा। हाम्रो भानुभक्त्तको रामायणमा छैन। चन्दा झाले छैन। तर यो कथा भने सबैमा छ। उनी रामकहाँ गइन् अनि भनिन्- अहा तिमीजस्तो पुरुष मजस्तो नारी। बडो सोचेर विधाताले बनाएको छ। भगवानले कस्तो जोडी मिलाएका छन्। अब हाम्रो विवाह हुनुपर्छ। हाम्रो प्रेम हुनुपर्छ।
रामले भने- मेरो त विवाह भइसकेको छ। उ मेरो भाइ लक्ष्मण कुवाँरा(कुमार) छ। उनी लक्ष्मणकहाँ गइन्। अनि लक्ष्मणले भने – म त रामको दास हो। मजस्तो दासको दासी भएर तिमीलाई के फाइदा?उनी राजा हुन्। अहिलेमात्रै जंगलमा बस्न आएका। फेरि उनी रामकहाँ गइन्। उनी विशुद्ध वासना र क्रोधकी प्रतिमूर्ति थिइन्।
उनको एकप्रति निष्ठा छैन। त्यो तुलसीदासले अझ सुन्दर तरिकाले देखाएका छन्।
अब हामी तारा भन्ने चरित्रकहाँ पुग्छौँ- ताराको व्यक्त्तित्व अदभूत छ। त्यहाँ उनले लक्ष्मणलाई सम्झाएको। बाली मारिएपछि सुग्रीवले भनेका थिए– बाली मारिएपछि म सीतालाई खोज्ने काममा सघाउँछु। चार महिना बितिसक्यो सुग्रीव आउँदैन। राम लक्ष्मण दुबै रिसाउँछन्। उग्र अग्नि भएर भन्छन्– अब त्यसलाई गएर सिध्याउँछु।यसाे भन्दा तारा दौडेर आउँछिन्। तारा सुग्रीवसँगै थिइन्। आराम गरिरहेकी। प्रियतमाको रुपमा। र रक्सीप्रति बाल्मिकीलाई बडा प्रेम छ। रक्सी पिएर उनका आँखा लोलाएका थिए। त्यो रक्सी बडो सुन्दर हुन्थ्यो होला आजको जस्तो थिएन होला। मगमग बास्ना आउने रक्सी। भगवानले पिउने रक्सी।
ताराले सम्झाउँछिन्– मनुष्य त वर्वाद हुन्छ। कामका पछि लागेर। विश्वामित्र मुनिले मेनकासँग लागेर दश वर्ष बितेको थाहै पाएनन्। दश दिन जसरी बित्यो। हामी त बाँदर राज्य पायौं। यत्रो वर्ष सुग्रीव तड्पिएर बसेका थिए सुख चयनका लागि कुन आश्चर्य भो? तपाईंले मनुष्य भएर बुझ्नुपर्दैन?अनेक साम दाम दण्ड भेद लगाएर उनले लक्ष्मणलाई शान्त बनाउँछिन्।
म के भन्न चाहन्छु भने आज सीता बन्न चाहनेलाई पनि बडो गाह्रो छ। किनकि आज सीता बन्ने हो भने तीन-तीनवटी बिवाह गर्ने प्रयासमा उहाँका राम जेल परिसक्नुहुन्छ। म सीता बन्दै बन्दिनँ भन्नेले पनि त्यसपछि के बन्ने सावित्री बन्ने कि, द्रौपदी बन्ने कि, तारका बन्ने कि। अहिल्या बन्ने कि। तारा बन्ने?
आज बन्दा के बन्ने?
मेरो भनाइ के हो भने यो केही पनि बन्न जरुरी छैन। तपाईंले तपाईं बने पुग्छ। यहाँ बस्नुभएकी प्रियंकाले प्रियंका बने पुग्छ। सरोजले सरोज बने पुग्छ। अमिताले अमिता बने पुग्छ।
रामायणकी सीताको सन्देश पनि त्यही हो।
सीता महानतम कहिले बन्नुभयो भने, रामले गरेको अपमानको बदलालाई ठुकराएर, अश्वमेध महायज्ञ गरेका रामलाई, अश्वमेध यज्ञ भनेको विश्वभरिको सम्राट भएँ भन्ने घोषणा हो। विश्वविजेता भएका रामको वामांगी भएर बस्नुको सट्टा, तिम्रो यो राजकाजलाई। तिम्रो यो राजसी रुपलाई म ठुकराउँछु। र जहाँबाट आएको थिएँ त्यहीँ जान्छु। धर्तीबाट प्रकट भएको थिएँ, धर्तीमै जान्छु।
आज सीतालाई आज्ञाकारी, पतिभक्त्तजस्ता जुन बिम्बहरू बनाइएका छन् ती गलत छन्। जुन नारी पात्रहरुको वर्णन छ त्यो करिब २००० वर्ष पहिलाको परिस्थितिमा हो। अहिले खासगरी विगत १०० वर्षको इतिहासमा अझ खासगरी ५० वर्षयताको सन्दर्भमा युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन्। यो बेला हामी यही परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका खोज्ने हो। अझ यसलाई सजिलोका लागि रामायणको वरिपरी लेखिएको महाभारतको कथा हेरौं। द्रौपदी पाँच पतीकी पत्नी थिइन्। पछि पतिव्रता कहलाइन्। कुन्ती चार अलग अलग पतिबाट चार पुत्र थिए। महाभारतका अलग अलग पात्रा हेर्नुस् र सीताको पात्र हेर्नुस्।
म रामायण जान्दछु काब्यको अनुशीलन गर्न सक्छु भनेको होइन। तर तुलसीदासजीको रामायणलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ।
यहाँ लेखिएको छ–
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिअहिं चारी
बृद्ध रोगबस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना
एसेहु पतिकेहुँ करकिय नारी पाव जमपुर दुख नाना
अर्थात् धैर्य, धर्म, मित्र तथा स्त्री यी चारलाई दु:खका समयमा चिन्नुपर्छ। र वृद्ध, रोगी, मूर्ख, गरीव, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, रिसाहा वा कुट्ने, पिट्ने दु:ख दिने जस्तो भए पनि यस्ता श्रीमानलाई हेला गर्ने नारीले रौरव नरक जानुपर्दछ।
संसारमा यस्ता चार प्रकारका पतिव्रता नारीका बारेमा लेखिएको छ यही किताबमा।
बिहे गरेपछि आफ्ना, दाजुभाइ, आफन्त सबैलाई बिर्सेर पति, पति मात्रै भन्नेखालको। त्यो प्रथम श्रेणीको पतिव्रता हो।
अर्को दाजुभाइ सम्मलाई सम्झिने त्यो द्वितीय श्रेणीको। दाजुभाइ सम्झेजस्तो गरेर अरुलाई पनि पल्याकपुलुक हेर्ने त्यो तृतीय श्रेणीको। परपुरषको बारेमा सपना देख्ने त्यो त पतित होइन महापतित हो।
सीता बन्न चाहन्नँ भन्ने अवस्थामा किन हाम्रा दिदीबहिनी छोरीहरू पुगे भन्ने कुरामा मलाई के लाग्छ भने यस्ता नचाहिँदा वाक्यहरू छन्। मलाई पनि एकदमै मन नपर्ने कुरा हुन्।
तुलसीदासका पालामा यस्तो हुन्थ्यो होला तर अहिले जमाना त्यस्तो छैन। यी सीतालाई दिइएका सन्देश थिए। सीताका नामा प्रचार गरिएका यस्ता अत्यन्त अपमानजनक वाक्यहरूले गर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ।
तर मलाई लाग्छ यो समाज र परिवारलाई संस्थागत गर्ने रामायण सबैभन्दा ठूलो बिम्ब हो। अहिले सीतालाई हामीले बिम्ब बनाउँदै गर्दा त्यो बेलाको परिस्थितिलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो बेला रामायण वा महाभारतहरू जसरी रचिए, परिवारलाई जसरी दर्शाइयो ती सबै मानव समाजलाई अगाडी बढाउने प्रयास थिए।
आज युग बदलिएको छ। अब सीताको युग छैन। अब सीता युग कुनै पनि हालतमा छैन। तर सीताले आफ्नो समयमा यो समाज विकासका लागि जुन एउटा त्याग, तपस्या, बलिदान, दृढता र साहसको जुन परामननीय तस्विर देखाइन् त्यो रामायणमा लेखिएको छ।
सीता आफ्नो समयको अत्यन्तै क्रान्तिकारी र स्वाभिमानी व्यक्त्ति थिइन्। तपाईं सीता बन्नुपर्छ। हिँजाेको होइन आजको सीता बन्नुपर्छ। तपाईं द्रौपदी पनि बन्नुपर्छ। तर हिजाेको द्रौपदी होइन आजको द्रौपदी बन्नुपर्छ। तपाईं गार्गी र मैत्रिणी पनि बन्नुपर्छ तर मिथिलाको मात्रै होइन पूरा विश्वकै गार्गी र मैत्रिणी बन्नुपर्छ।
तर हाम्रा पण्डितहरूले, पुराणपन्थीहरू हाम्रा सीताहरूलाई लाजवन्ती झार बनाइदिए। त्यसैले हामीले आजको वास्तविक सीता बन्ने प्रयास गरौं।
(जनकपुर साहित्य महोत्सवमा चिन्तक प्रदीप गिरीले सीताका बारेमा व्यक्त्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश-प्रस्तुती गजेन्द्र बोहरा)